TW dzino 50% -75% Sausage, anokurumidza nechando chikafu, maresitorendi, tudyo zvokudya, sauces
TC dzino 50% -75% Miriwo, nyama zvigadzirwa, maresitorendi, tudyo zvokudya, sauces
TF dzino 50% -75% Miriwo, nyama zvigadzirwa, maresitorendi, tudyo zvokudya, sauces
TB dzino 50% -75% Miriwo, nyama zvigadzirwa, maresitorendi, tudyo zvokudya, sauces
Note: Mureza nokurondedzerwa ndivo chete reference, tsika Specification manufactures vari akamugamuchira. More mashoko hwakadzama kusanganisira MSDS jira, mujenya uremu, kurongedza ezvinhu, kutungamirira nguva uye mutengo zvose wakagadzirira chikumbiro, ndapota chete tinya pane chikumbiro mashoko, muchapiwa Mhinduro yedu chiriporipocho mumaawa 24.
Q1: Ndiri kuziva zvinhu zvenyu, asi zvino ndiri kubva China, unokwanisa kupa zvisiri zvenyu yekwedu?
Q2: Ndingashandisa kuwana ivhu?
Q3: Zvinoita here kuti tsika pamapepa aya pamwe yangu magadzirirwo?
Q4: sei ndikusunungurirei muripo kwauri?